android ဖုန်းများအတွက် App ကို Lock ကို APK ကို | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ » App ကို Lock ကို
App ကို Lock ကို APK ကို
AppLock မိုဘိုင်း apps များအတွက်သင့်ရဲ့ privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အလင်း app ကိုကာကွယ်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
- AppLock Facebook မှာ, Whatsapp, ပြခန်း, Messenger ကို, SMS ဆက်သွယ်ရန်များ, Gmail, Settings များ, အဝင်ခေါ်ဆိုမှုများနှင့်သင်ရွေးချယ်မည်သည့် app ကိုသော့ခတ်နိုင်ပါ။ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်တားဆီးနှင့် privacy ကိုစောင့်ရှောက်။ လုံခြုံရေးအာမခံပါသည်။
- AppLock PIN ကိုသော့ခတ်, Pattern ကိုသော့ခတ်ခြင်းနှင့်လက်ဗွေ Lock ကိုရှိပါတယ်, app များကိုသော့ခတ်ရန်သင့်အကြိုက်ဆုံးစတိုင်လ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ pattern သော့ခတ်သော့ဖွင့်ဖို့ပိုလွယ်ကူစေရန်နှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်သည်။ PIN ကိုသော့ခတ်ကျပန်းကီးဘုတ်ရှိပါတယ်။ သငျသညျ app များကိုသော့ခတ်ရန်အဘို့အတာပိုလုံခြုံ။ အဘယ်သူမျှမကပိုစိုးရိမ်ကြောင့်လူစကားဝှက်သို့မဟုတ်ပုံစံပြူလိမ့်မည်။ ပိုများသောလုံခြုံ!
သိကောင်းစရာများ:သငျသညျကို Samsung တို့ကဖန်ဆင်းထားသည်ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ် Android Marshmallow ပြေးသောလက်ဗွေရာစာဖတ်သူနှင့်အတူဖုန်းရှိပါကသင်သည် "သော့ဖွင့်ဖို့လက်ဗွေရာကိုသုံးပါ" ဟုအမည်တပ်ထားသော App ကို Lock ကို setting တွင် box ကိုစစျဆေးနိုငျ
- ချမ်းသာတဲ့ themes များ
ကျနော်တို့ built-in ပါပွီလှပသောစံနမူနာနှင့်သင့်ရွေးချယ်မှုများအတွက် PIN ကို themes များ၏အစုံ, update လုပ်ဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
- AppLock နှင့်အတူ, သငျသညျလိမ့်မည်:
တစ်စုံတစ်ဦးကနောက်တဖန်သင့်ရဲ့ apps များအတွက်ပုဂ္ဂလိက data တွေကိုဖတ်စိုးရိမ်ဘယ်တော့မှမ!
အသစ်က installation နဲ့ app ကိုမွမ်းမံ, Real-time အလားအလာအန္တရာယ်များကိုရှောင်ရှားသတိပေးစောင့်ကြည့်, လုံခြုံသင့်ရဲ့ device များစောင့်ရှောက်ခြင်း။
- ဖုန်း Boost: သင်၏ဖုန်းကိုတက်မြန်စေ
သင့် Android ဖုန်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိတဲ့ Junk နှင့် cache ကို၏မြန်နှုန်းမြှင့်တင်ရန်။
- ကို Safe lockscreen
PIN နံပါတ်နှင့်ပုံစံသော့ခတ်လုံခြုံရေးနှင့်အတူကျူးကျော်သူတွေကမှသင်၏ဖုန်းကိုလုံခြုံ AppLock ။
အမြန်ရိုးရှင်းသော * တစ်ဦးက key ကိုသော့ခတ်,,!
အခြားသူများကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ * Lock ကိုလျှောက်လွှာ, ဖယ်ရှားရန် applications များဝယ်ယူရန်အခမဲ့များမှာ!
စနစ် settings ကိုပြောင်းလဲရန်ဖုန်း၏အလွဲသုံးစားမှုများကာကွယ်တားဆီးဖို့ * Lock ကို setting ကို!
သင်၏အယ်လ်ဘမ်, ဗွီဒီယိုနဲ့အထိခိုက်မခံ applications များအမျိုးမျိုးကိုမြင်လျှင်ထံမှအခြားသူများကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ * သီးသန့်လုံခြုံရေးသော့ခတ်,!
* စံနမူနာ Lock ကို: ရိုးရှင်းပြီးလတ်ဆတ်တဲ့ interface ကို, ပိုမြန်သော့ဖွင့်!
* PIN ကိုသော့ခတ်: ကျပန်းကီးဘုတ်။ သငျသညျ app များကိုသော့ခတ်ရန်အဘို့အတာဘေးကင်း
* ပုံစံ (ဥပမာတွစ်တာ, ပြခန်း, ကင်မရာ) ကို အသုံးပြု. မဆို app များကိုသော့ခတ်
* Lock ကိုမျက်နှာပြင်အချိန်ကုန်
* Lock ကို 3G, 4G data တွေကို Wi-Fi, Bluetooth နှင့်ပိုပြီး
* သော့ခတ် App အသစ်များ
* Uninstall ကာကွယ်ခြင်း
* သတ်မှတ်မည် Lock ကိုအချိန်သာအချို့အချိန်တွင်သော့ခတ်သက်ဝင်စေဖို့
* Easy-To-အသုံးပြုခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူဖော်ရွေ GUI ကို
- ထို Transparent စံနမူနာ Lock ကို Download လုပ်ပြီး Install လုပ်ပါ။
- setting ထဲမှာသွားပြီးသော့ခတ် enable ။
- သော့ဖွင့်ရန်သင့်ရဲ့ပုံစံဆွဲခြင်းနှင့်သင်သော့ခတ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သင်က home screen ကိုကြည့်ပါ။
Multi-ဘာသာစကားဗားရှင်း optimization ※;
4.78 ကို MB
AppLock - သော့ခတ်သည်
အောက်တိုဘာလ 4, 2014 မှာ 6: 01 ညနေ
ဧပြီလ 14, 2014 မှာ 11: 34 နံနက်
မတ်လ 10, 2014 မှာ 7: 57 ညနေ
ရွက်တိုင် app ကို hai sab Koi အသုံးပြုမှု karta hai
Sneha Nandanwar says:
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 19, 2014 မှာ 3: 49 ညနေ
ဟေး .. ! ဒါကြောင့်အလုပ်မလုပ်အောင်ဘယ်လို ?? ...
တစ်ဦး app..plzz သော့ခတ်ဖို့ဘယ်လိုခြေလှမ်းညွှန်ကြားချက်ဖြင့်ငါ့ကိုခြေလှမ်းပေး
ဇန်နဝါရီလ 13, 2014 မှာ 9: 49 ညနေ
Ivan က de pato says:
ဇန်နဝါရီလ 12, 2014 မှာ 8: 55 ညနေ
နိုဝင်ဘာလ 22, 2013 မှာ 5: 31 ညနေ
Bhavik Bamlani says:
အောက်တိုဘာလ 5, 2013 မှာ 12: 18 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 3, 2013 မှာ 6: 21 ညနေ
ငါတိုင်းတ ဦး တည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကောင်းတဲ့ app ကို